कोरोनाको संक्रमणको कारण देखाउँदै दूतावासले शब नपठाइदिएपछि विक्षिप्त परिवार
१ चैत, भक्तपुर । बिहान उठेपछि तस्बिरमा छोराको हसिलो अनुहार हेर्छिन् । राति सुत्नुअघि त्यहि फोटो नियालेर सिरानीमा राख्छिन् ।
यताउता कोल्टे फेरेर निदाउन खोज्छिन । निद्रा लाग्दैन । सरस्वती खड्का (६५) लाई यस्तो छटपटी भएको दुई महिना भयो । चीनमा छोरो वितेको खबर पाएयता उनका आँखा ओभानो छैनन् । ‘आमा उठ्नु भयो, खाना खानु भो ? सन्चो विसन्चो के छ ?’ फोनमा सोधिरहरन्थ्यो,’ दोलखा सैलुङ गाउँपालिका–३ काटाकुटीकी सरस्वतीले मसिनो स्वरमा भनिन्, ‘अब कस्ले सोध्छ त्यसरी ? बल्ल बल्ल निदाउँछु, सपनामा पनि खै किन हो, आउँदैन । सद्गत गर्न पाए आउथ्यो कि ।’
गत माघ ४ गते राति चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहानमा उनका ४० वर्षिय छोरा पुष्करको निधन भयो । भोलिपल्ट परिवारले दुःखद खबर पाए । तर, अहिलेसम्म न उनको पोष्टमार्टम भएको छ न नेपाल ल्याउने सुरसार नै छ । शबको प्रतिक्षामा रहेकी आमा सरस्वती भगवानको नाम जप्दै फ्रेममा राखिएको फोटो नियाल्छीन ।
बुहानस्थित आफ्नै कोठामा मृत भेटिएका खड्काको पोष्टमार्टम भएको छैन । शब बुहानकै बुछा«ङस्थित शबगृहमा राखिएको उनका आफन्त धनबहादुर कार्कीले बताए । कोरोना भाइरसका कारण शब नेपाल ल्याउन नपाएको आफन्तको गुनासो छ । शनिबारको कान्तिपुर दैनिकबाट